के यो पल र आचलबीच बढ्दै गएको निकटता हो या अन्य कलाकारहरु संग घट्दै गएको यी दुईको मित्रता ? – An Online Entertainment News Portal
HomeGossipके यो पल र आचलबीच बढ्दै गएको निकटता हो या अन्य कलाकारहरु संग घट्दै गएको यी दुईको मित्रता ?
हालै जापान सम्पन्न सुर्य ईन्टरनेशनल अवार्ड-२०१८ ” मा भाग लिन शुक्रबार नेपालका विभिन्न कलाकारहरुको जम्बो टोलि जापान पुगेका थिए । जापान जाने कलाकारहरुको टोलीको बीचमा एक थियो आचल शर्मा र पल शाहको जोडी ।
जापान पुगेका पल र आचललाई लिएर सिने क्षेत्रमा विभिन्न चर्चा परिचर्चा तथा यी दुईको सम्बन्धलाई लिएर धेरै गसिपहरु समेत बनेका छन् ।
साथै अवार्ड कार्यक्रम सम्पन्न भए संगै जापान जाने सम्पूर्ण टोली घुम्फिरमा लागेका छन् । सबैले आ-आफ्नो टिम बनाएर घुम्ने क्रममा पल र आचल पनि छुटै घुमेको देखिएको छ अर्थात आचल र पलको जापान घुमफिरको फोटो आचलले आफ्नो फेसबुक अकाउन्टमा शेयर गरेकी छिन ।
आचलले आफ्नो फेसबुक अकाउन्टमा शेयर गरेको फोटोमा यी दुईमात्र देखिएका छन् । भने अन्य कुनै पनि व्यक्ति कलाकारहरु यी दुईका साथमा देखिएका छैनन् । जसबाट जो कोहिले पनि यी दुईको सम्बन्धका बारेमा अन्दाजा लगाउन सकिन्छ कि यी दुई एक अर्काको कति नजिक छन् । यो फोटोबाट यी दुईको सम्बन्ध झन्डै खुलेको देख्न सकिन्छ ।
कलाकारहरुको जम्बो टोलि जापानमा घुम्फिर गरिरहेको बेला आचलले आफ्नो फेसबुकमा शेयर गरेको फोटोले यी दुई कुरा सोच्न भने अवश्य सकिन्छ कि, यो पल र आचलको बढ्दै गएको निकटता हो या अन्य कलाकारहरु संग घट्दै गएको यी दुईको मित्रता मित्रता !
SURYA INTERNATIONAL AWARD
छोटो समयमा उपाधिले थिचिएका अनमोल
सेल्फिको साथमा ’अनुराग’को कलेज क्याम्पियन सुरु !